GIMP 2.10.18 inouya neiyo nyowani 3D mhedzisiro inogadzirisa akawanda mabugs | Linux Vakapindwa muropa
GIMP 2.10.18 inosvika iine nyowani 3D mhedzisiro, yakashongedzwa padivi uye kugadzirisa akawanda madhiragi
Chido ndechekuti, pavakango gadziridza iyo Snap kuti ive v2.10.14 uye vange vashandisa iyi pasuru zvakare, GNOME Foundation yaburitsa GIMP 2.10.18. Ini pachangu, zvese zvandaida yaive iyo nyowani sarudzo iyo inotibvumidza isu kuti tiwedzere mhedzisiro kune yakasarudzika tisina kuganhurirwa nehukuru hweiyo dura, saka ndakafunga kuti ndinogona kugara mwaka mune iyo Snap package. Asi ndakanga ndisina kururama. Iyo vhezheni nyowani zvakare yakakosha.
GIMP 2.10.18 iri kuuya kuzobudirira iyo software v2.10.14. Pakutanga vaifanira kunge vakaburitsa v2.10.16, asi ivo vakaisvetuka kana zvese zvainge zvagadzirwa nekuti vaive neyakaipisisa bug yekugadzirisa. Naizvozvo, pakati pezvinhu zvitsva zvinosanganisira Gimp 2.10.18, isu tatoziva kuti kune zvigadziriso zvebug, asi izvi zvakajairika mushure mekugadziriswa. Kune zvimwe zvinonyanya kufadza, senge 3d mhedzisiro kana padivi reparutivi izvo izvo zvino zvinoronga maturusi nekukanganisa.
1 GIMP 2.10.18 Zvakakosha
2 Iye zvino yawanikwa paFlathub, munguva pfupi iri mune isiriyo repositi
GIMP 2.10.18 Zvakakosha
Zvishandiso izvozvi zvakarongedzwa mubhokisi rekushandisa nekutadza.
Slider ikozvino inoshandisa compact kodhi ine yakavandudzwa mushandirapamwe kudyidzana.
Yakagadziriswa zvakanyanya mushandisi ruzivo rwekushandura preview.
Nzvimbo dzinokosheswa dzave kujekeswa kana uchidhonza dockable dialog.
Nyowani 3D shandura chishandiso kutenderera uye kufambisa zvinhu.
Zvakawanda zvakatsetseka bhurasho pfupiso yekutarisa kufamba pane canvas.
Symmetry pendi zvinowedzera.
Kukurumidza kurodha ABR mabhurashi.
PSD inotsigira kugadzirisa.
Yakabatanidzwa mushandisi yekumisikidza yekubatanidza uye kusimbisa matete.
Tarisa uone matsva ekuzivisa vashandisi vezvitsva zviripo zvinoburitswa.
28 gadziridzo, 15 shanduro dzekushandura.
Sezvauri kuona nerondedzero yenhau, yakatsanangurwa zvakanyanya mu official release katsamba (muChirungu), iyi inguva yakakodzera kuisa. Kutanga, izvo zvishandiso zvakaiswa mumapoka nekutadza inoita kuti zvese zvinyatsonaka. Kuti uenderere mberi, iyo nyowani 3D chishandiso chinotaridzika zvakanaka, icho pamwe chete neiyo v2.10.14 basa rinoita kuti mhedzisiro irege kugumira nehukuru hwesosi zvinoreva kuti isu tinokwanisa kugadzira akawanda anoorora magwaro. Uye pakupedzisira, zviputi zvakagadziriswa, pakati payo zvimwe yeimwe vhezheni yapfuura iyo dzimwe nguva yaionekwa mushure mekutanga software.
Iye zvino yawanikwa paFlathub, munguva pfupi iri mune isiriyo repositi
Dambudziko diki nderekuti, kana tikashandisa Linux, izvozvi tinogona kungoisa GIMP 2.10.18 mushanduro yayo Flatpak. Haisi dambudziko kana tichida aya marudzi emapakeji, asi idambudziko kana tichida dzimwe sarudzo. Iyo vhezheni yeiyo yepamutemo marekodhi ezvizhinji zvekuparadzirwa kweLinux ndeyekare kwazvo uye pasuru Snap... zvirinani usataure chero chinhu. Kune rimwe divi, isu tinogona zvakare kuisa GIMP kubva ku unofficial repository, asi izvozvi ichiri pav2.10.14 yeiyo software. Kana iwe uchida kuisa iyi vhezheni, iyo ichavandudzwa mumaawa mashoma anotevera, iwe unongofanirwa kuvhura terminal uye nyora iyi mirairo:
GIMP 2.10.18 iri zvakare ikozvino inowanikwa yeWindows uye macOS kubva kune yepamutemo webhusaiti yeprojekti, iwe yaunogona kuwana kubva Iyi link. Sekuda kuziva, taura kuti chimiro nebarbar sezvachiri kuoneka pawebhusaiti yepamutemo hachiwonekeke seichi mushure mekuvandudzwa. Zvishandiso zvakaunganidzwa zvinoonekwa (ikozvino unofanirwa kudzvanya kwenguva yakareba kuti usarudze zvimwe) uye unogona kugadzirisa odha, asi haina kubuda zvakafanana. Kuti tiite izvi, isu tinofanirwa kubvisa maturusi nemaoko uye, kana pasina matabhu akasara, gadzirisa nzvimbo yacho nekutsvedza kuruboshwe. Usatya: chero chishandiso chichaonekwa kurudyi kana tikadzvanya pairi kaviri
Chii chiri nyore kuwana ndeye itsva 3D mhedzisiro. Tichaiwana kubva pachikamu Zvishandiso / Shanduko Maturu / 3D Shanduko. Panguva iyo isu patinosarudza sarudzo, tinogona kutanga kugadzirisa mafungiro eiyo inoshanda dura, chimwe chinhu chatinogona kuita nekudzvanya uye kufambisa pointer, senge patinodzora saizi, kana nekufambisa iwo anotsvedza.
Wakamboedza here iyo vhezheni itsva? Iwe unofungei nezve iyo nhau iyo yainounza pasi peruoko?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » GIMP 2.10.18 inosvika iine nyowani 3D mhedzisiro, yakashongedzwa padivi uye kugadzirisa akawanda madhiragi